Amazon Fire TV Cube, ka soo horjeedka xiisaha leh ee Apple TV oo ay saxiixday Amazon | Wararka IPhone
Amazon Fire TV Cube, ka soo horjeedka xiisaha leh ee Apple TV oo ay saxiixday Amazon
Ruben gallardo | | Tartanka
Amazon waxay soo bandhigtay qalab cusub oo lagu xakameynayo wax kasta oo la xiriira multimedia. Waxay ku saabsan tahay Amazon Dabka TV Cube, qalab cusub oo damacsan inuu ka jaro saamiga suuqa ee Apple TV waana isku darka xiisaha leh ee u dhexeeya Amazon Echo iyo Amazon Fire TV Stick.
Kahor intaanan bilaabin inaan kuu sheegno waxa ay noo fidiso Amazon Fire TV Cube, taas ayaan kuu sheegi doonaa bilaha soo socda helitaanka Alexa ee dalal kale sida Spain horay ayaa loo xaqiijiyay. Sidaa darteed, inkasta oo marka horeba aan waxba laga sheegin helitaanka qalabkan meel ka baxsan Mareykanka, haddana aad ayey suurtogal u tahay imaatinka Alexa ee Isbayn dhammaan 2018, Amazon Fire TV Cube sidoo kale waxay ku degtaa dhulalkaas. Dhammaan waxyaabaha kor ku xusan waxay yiraahdeen, aan sii wadno daahfurka shirkadda Jeff Bezos.
Amazon Fire TV Cube waa qalab xiiso leh Streaming waxyaabaha ku jira. Sidoo kale, marka lagu daro inaad awood u yeelan karto inaad ku soo bandhigto waxyaabahaaga adoo adeegsanaya fiidiyowga oo ku jira barxadda dalabka, sidoo kale waad sameyn kartaa waxaan dhagaysan karnaa muusikada oo xitaa u adeegsan karnaa sida ku hadalka caqliga badan tan iyo markii ay leedahay kaaliyaha dalwaddii Alexa.
Tan dambe waxay ka dhigan tahay inaan codsan karno waxqabadyada qaarkood amarrada codka ee noo oggolaan doona inaan xakameyno qalabka annaga oo aan gacmaheenna ku mashquulin kontaroolada fog fog. Dhinaca kale, tan Amazon Fire TV Cube ayaa leh HDR iyo taageerada tikniyoolajiyadda Dolby Atmos, waa wax aan ku farxi doonno markaan filim ku daawanno qolka fadhiga oo aan helno cod cad oo hareeraysan.
Sida isku xirnaanta, kooxda cusub ee Amazon Waxay leedahay WiFi, dareemayaal IR oo kala duwan iyo isku xirka HDMI-CEC —Kan dambe inuu awoodo inuu adeegsado Alexa oo leh amarrada codka wuxuuna ku shaqeyn karaa telefishanka, tusaale ahaan. Sidoo kale, dareemayaasha IR ee kaladuwan ee ay leeyihiin Amazon Fire TV Cube waa inay awoodaan inay ku xakameeyaan qalabka kale ee qolka dhexdiisa. Magac ahaan, awood u yeelan karo inuu noqdo maskaxda qolka fadhiga mar kasta.
Ugu dambeyntiina, dhinacyada farsamada badan ee Amazon Fire TV Cube ayaan taas kuu sheegi karnaa wuxuu leeyahay 2GB RAM, 16GB oo keyd ah oo gudaha ah, iyo processor 1,5GHz afar geesle ah soo noqnoqoshada shaqada. Dhanka kale, xirmada iibka waxaa ka mid ah dhowr fidiyayaal IR ah iyo Ethernet-ka adabtarada USB-ka ah haddii aan rabno isku xirka khadka.
Qoraal ahaan, Amazon Fire TV Cube ma aha oo kaliya inay la shaqeyso Amazon Prime Video platform, laakiin Waxaan sidoo kale xakameyn karnaa koontadayada HBO, Netflix iyo adeeg kale. Dhanka kale, Amazon waxay heshay xuquuq ay ku baahiso horyaalada kubada cagta Ingriiska adeegooda, Horyaalka. Oo xanta ayaa sharad in Way daneynayaan helitaanka xuquuqda Isbaanishka LaLiga.
Qiimaha tan Amazon TV Fire Cube waa $ 119, inkasta oo dadka isticmaala Prime ay heli doonaan dallacsiin la heli karo inta lagu jiro 30-ka maalmood ee ugu horreeya oo ay ku heli karaan qalabkan qiimo dhimis dhan $ 30 qiimaha asalka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Amazon Fire TV Cube, ka soo horjeedka xiisaha leh ee Apple TV oo ay saxiixday Amazon
Xanta ugu horeysa ee soo socota ee Apple Watch, ma laha badhanno jirka ah
IOS 12 waxay hagaajineysaa maareynta sirta